2013 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​ကျ​နော် ​သင်​ခန်း​စာ​တွေ​ကို ​အ​ရင်​တုန်း​က ​ဆက်​တိုက် ​တင်​ဖြစ်​ခဲ့​ပါ​တယ်။ ​အဲ့​ဒီ့​က​တည်း ​က​နေ ​ပြတ်​သွား​တာ ​ခု​ချိန်​ထိ​ပါ​ပဲ။ ​အ​ခု ​ကျ​နော် ​နောက်​ထပ် ​ထပ်​တင်​ရ​မည့် video ​သင်​ခန်း​စာ​ပေါင်း 100 ​ကျော်​လောက် ​ဖြစ်​မယ်​ထင်​ပါ​တယ်။ ​အဲ့​တော့ ​ညီ/​ညီ​မ ​များ​ဖက်​က​နေ ​အ​ချိန်​အ​တိုင်း​အ​တာ ​တစ်​ခု​ပဲ ​ပေး​ဖို့​လို​ပါ​တယ်။ ​ကျ​နော် ​ဖေ့​ဘုတ်​မှာ ​မ​ပြတ်​တင်​ပေး​နေ​ပါ​တယ် ​ဆို​တာ​ကို ​သိ​စေ​ချင်​တာ​ပါ။ video ​ကို ​ကြည့်​ဖို့ internet speed ​သိပ်​မ​ကောင်း​တဲ့ ​သူ​များ​အ​တွက်​တော့ ​ကျ​နော် Download ​လုပ်​လို့​ရ​အောင် mediafire ​က​နေ ​တင်​ပေး​နေ​ပါ​တယ်။ ​တစ်​ချို့ ​အ​ပိုင်း​လေး​တွေ​က ​ရှင်း​တော့ ​ရှင်း​ပြ​လိုက်​တယ် ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​သိ​စေ​ချင်​လို့ ​ရှင်း​ပြ​လိုက်​ပေ​မယ့် ​သိ​ထား​ရင် ​ရ​ပြီ​ဆို​တာ​မျိုး​လည်း ​ရှိ​ပါ​တယ်။ ​သိ​တော့​သိ​တယ် ​သိပ်​မ​သုံး​ဖြစ်​တဲ့ tools ​တွေ​လည်း​ပဲ ​ပါ​ဝင်​မှာ ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ​အား​လုံး​ပဲ ​ရွှင်​လမ်း​ချမ်း​မြေ့ ​ကြ​ပါ​စေ။ video ​သင်​ခန်း​စာ​တွေ​က ​အ​မည်​နဲ့ ​ပေး​ထား​တာ​ဆို​တော့ ​နည်း​နည်း​တော့ ​အ​စီ​တ​ကျ ​ဖြစ်​ချင်​မှ ​ဖြစ်​ပါ​လိမ့်​မယ်။ ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​အ​ဆင်​ပြေ​ကြ​လိမ့်​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​မိ​ပါ​တယ်။
Facebook page = https://www.facebook.com/NyiNayMinIT
Upload By Nyi Nay Min
Tutorial class place = Mahachai, Thailand
​သင်​တန်း​ကြာ​မြင့်​ချိန် = ၃ ​လ
​အ​ဆို​ပါ ​သင်​ခန်း​စာ​များ​ကို ​ကိုယ်​တိုင် ​လေ့​လာ​လျှင်​ဖြစ်​စေ ​တစ်​ခြား​သူ​များ​ကို ​ပြန်​လည်​ဝေ​ငှ​လျှင် ​ဖြစ်​စေ ​လွတ်​လပ်​စွာ ​အ​သုံး​ပြု​နိုင်​ပါ​တယ်။ ​သင်​ခန်း​စာ​ထဲ​တွင် ​ပါ​ဝင်​သော ​အ​ချက်​အ​လက်​များ​ကို ​ပြန်​လည် ​ရှင်း​ပြ​ရန်​နှင့် ​စာ​အုပ်​ထုတ်​ရန်​အ​တွက် ​အ​ချိန်​အ​တော် ​ကြာ​မြင့်​မည် ​ဖြစ်​သ​ဖြင့် ​နောက်​ထပ်​ထွက်​လာ​မည့် ​စာ​အုပ်​များ​ကို ​စောင့်​မျှော် ​ဖတ်​ရှု့​ပေး​ပါ​ရန် ​မေ​တ္တာ​ရပ်​ခံ​အပ်​ပါ​တယ်။ ​ဖေ့​ဘုတ် ​စာ​မျက်​နှာ​က video ​ဖိုင် ​များ​ဟာ ​အ​ကျိုး​အ​များ​ကြီး ​မ​ဖြစ်​တောင် ​ညီ/​ညီ​မ​များ ​ကွန်​ပျူ​တာ​အ​သုံး​ပြု​နိုင်​ဖို့​အ​တွက် ​လွယ်​ကူ​အ​ကျိုး​ရှိ ​မည့် ​ထောက်​တိုင် ​တစ်​ချောင်း​ဖြစ်​လာ​မယ် ​ဆို​ခဲ့​လျှင် ​ကျ​နော် ​ပင်​ပန်း​ရ​ကျိုး ​နပ်​ပါ ​တယ်။ ​ခေတ်​မီ​ပွင့်​လင်း​မြင်​သာ​တဲ့ ​ကျ​နော်​တို့ ​မြန်​မာ​နိုင်​ငံ​ကြီး ​တိုး​တက်​ဖို့ ​လက်​အ​များ​ကြီး​လို​ပါ​တယ်။ ​တစ်​ယောက်​တည်း ​တတ်​ကျွမ်း​နေ​ယုံ​နဲ့ ​နိုင်​ငံ​တိုး​တက်​တယ်​လို့ ​မ​ဆို​လို​နိုင်​ပါ​ဘူး။ ​သဲ​တ​ဆုပ်​နိုင် ​သဲ​တစ်​ဆုပ်၊ ​တူ​တစ်​ချောင်း​နိုင် ​တူ​တစ်​ချောင်း၊ ​ကွန်​ပျူ​တာ ​တစ်​လုံး​သုံး​နိုင်​လျှင် ​ကွန်​ပျူ​တာ​တစ်​လုံး၊ ​ကျ​နော်​တို့ ​ပြည်​သူ​တွေ ​ဖက်​က​နေ ​တတ်​အား​တဲ့ ​အား​တွေ​နဲ့ ​ကျ​တဲ့​အ​ရပ်​က​နေ ​ကြိုး​စား​ပြီး ​နောက်​တစ်​ချိန် ​လို​အပ်​လာ​မည့် ​မြန်​မာ​နိုင်​ငံ​ရဲ့ ​လုပ်​သား​တွေ ​နေ​ရာ​မှာ ​တစ်​ခြား​နိုင်​ငံ​သား​တွေ ​အ​စား ​ကျ​နော်​တို့ ​နိုင်​ငံ​သား ​တွေ ​ဝင်​နေ​ရာ​ယူ​နိုင်​အောင် ​ကြိုး​စား​ဖို့​လို​ပါ​တယ်။ ​မြန်​မာ​နိုင်​ငံ​မှာ ​လူ​တန်း​စား ​အ​လွှာ ​အ​သီး​သီး ​ရှိ​ကြ​ပါ​တယ်။ ​အဲ့​ဒီ့ ​လူ​တန်း​စား ​အ​လွှာ​မှာ ​အောက်​ခြေ ​အ​လုပ်​ကြမ်း​သ​မား​က​နေ ​ပ​ညာ​ရှင်​များ​အ​ထိ ​လူ​တန်း​စား​မျိုး​စုံ​ရှိ​ပါ​တယ်။ ​တ​ရုတ်​နိုင်​ငံ​ဟာ ​တစ်​ခြား​နိုင်​ငံ​ခြား​သား ​ခေါ်​ခန့်​တာ ​အ​တော် ​နည်း​ပါ​တယ်။ ​သူ့​နိုင်​ငံ​က ​အ​လုပ်​သ​မား​လို​အပ်​မှု့​ကို ​သူ့​နိုင်​ငံ​သား​နဲ့​ပဲ ​ပြန်​ဖြည့်​တင်း​ပြီး ​တစ်​ခြား​တစ်​ဖက်​က​နေ ​ထွက်​သွား​မည့် ​ဝင်​ငွေ​ကို ​ထိန်း​ထား​တာ​လဲ ​နိုင်​ငံ ​တိုး​တက်​ဖို့ ​တွန်း​အား ​တစ်​ခု​ပါ​ပဲ။ ​ကျ​နော်​တို့​လည်း ​တစ်​ချိန်​ချိန်​မှာ ​မြန်​မာ​နိုင်​ငံ​အ​တွက် ​တတ်​အား​တဲ့ ​ဖက်​က​နေ ​တွန်း​အား​တွေ ​ပေး​နိုင်​မယ် ​ဆို​ရင် ​ကျ​နော်​တို့​လို​အပ်​နေ​တဲ့ ​လို​ချင်​နေ​တဲ့ ​နိုင်​ငံ​တစ်​ခု​အ​ဖြစ် ​က​မ္ဘာ့​အ​လည်​မှာ ​နေ​ရာ​တစ်​ခု ​ရ​လာ​မှာ​ပါ။ ​ဘယ်​နိုင်​ငံ​တွေ​ပဲ ​ကျ​နော်​တို့ ​နိုင်​ငံ​သား​တွေ ​ရောက်​နေ​ပါ​စေ။ ​အ​မိ​မြေ​ကို ​မ​လွမ်း​တဲ့​သူ ​အ​မိ​မြေ​မှာ ​နေ​စဉ်​ကာ​လ​တွေ​ကို ​မ​မက်​မော​တဲ့​သူ ​ဘယ်​သူ​မှ ​မ​ရှိ​ပါ​ဘူး။ ​တစ်​ခု​ခု ​တိုက်​ဆိုင်​မှု့ ​ရှိ​တိုင်း​မှာ ​အ​မိ​မြေ​ကို ​ပြေး​ပြီး ​သ​တိ​ရ​မိ​တာ​ဟာ ​လက်​တို့​စ​ရာ​မ​လို​တဲ့ ​အ​သိ​တစ်​ခု​ပါ။ ​ကို​ဘယ်​ဘာ​သာ ​စ​ကား​နဲ့ ​နိုင်​ငံ​ခြား ​ရောက်​နေ​ပါ​စေ။ ​ဘယ်​လောက်​ပဲ ​အ​မြင့်​ကို ​ရောက်​နေ​ပါ​စေ။ ​ထိုင်း​နိုင်​ငံ​မှာ ​မြန်​မာ​နိုင်​ငံ​သား​ကို ​စော်​ကား​လိုက်​တယ်။ ​မြန်​မာ​နိုင်​ငံ​သား​ကို ​နှိပ်​စက်​လိုက်​တယ်​ဆို​တဲ့ ​သ​တင်း​တွေ ​အ​ပြင်​မှာ ​မ​တွေ့​ရ​ဘဲ ​အင်​တာ​နက်​မှာ ​ဖတ်​ရ​ရင်​တောင် ​သွေး​တွေ ​ဆူ​ဝေ​လာ​တတ်​ပါ​တယ်။ ​ဘာ​မှန်း​မ​သိ​တဲ့​ဒေါ​သ​ထွေ ​ထွက်​လာ​တတ်​ပါ​တယ်။ ​ဒါ​ဟာ ​လူ​မျိုး​ဆို​တဲ့ ​လူ​မျိုး​ရေး ​အ​သိ​တစ်​ခု​ကြောင့်​ပါ။ ​အဲ့​ဒီ့​နှိပ်​စက်​ခံ​ရ​တဲ့​သူ ​စော်​ကား​ခံ​ရ​တဲ့​သူ ​မှန်​သ​လား ​မှား​သ​လား ​ဘာ​ဖြစ်​သ​လဲ​ဆို​တာ​က ​ဒု​တိ​ယ ​အ​သိ​တစ်​ခု​ပါ။ ​ပ​ထ​မ​အ​သိ​က ​လူ​မျိုး​ရေး​အ​သိ​တစ်​ခု​ဆို​တာ ​မြန်​မာ့​သွေး​ပါ​ရင် ​ထည့်​ပေး​စ​ရာ​မ​လို​တဲ့ ​အ​သိ​တစ်​ခု​ပါ။ ​ဘယ်​နေ​ရာ​ပဲ​ရောက်​ရောက် ​ဘယ်​ရောက်​ပဲ ​နှိပ်​စက်​ခံ​ရ​ပါ​စေ။ ​ကျ​နော်​တို့ ​ဘယ်​အ​ဆင့်​ထိ​ပဲ ​ရောက်​နေ​ပါ​စေ။ ​မြန်​မာ​နိုင်​ငံ​သား ​ကိုယ့်​န​ဘေး​မှာ ​နိမ့်​ကျ​နေ​ရင်​ဖြစ်​ဖြစ်။ ​ဒု​က္ခ​ရောက်​နေ​ရင်​ဖြစ်​ဖြစ် ​စိတ်​မ​ကောင်း​ကြီး​စွာ​နဲ့ ​တစ်​ခု​ခု​တော့ ​ကူ​ညီ​ပေး​ခဲ့​မိ​တာ​ချည်း​ပါ​ပဲ။ ​မ​ကူ​ညီ​ဖြစ်​ပဲ​နဲ့ ​မြင်​ပြီး​တော့ ​ပြန်​လာ​ရင်​တောင်​မှ ​ည​အိပ်​တဲ့​အ​ချိန်​မှာ ​ကို​မ​ကူ​ညီ​လိုက်​ရ​တဲ့ ​ဒု​က္ခ​ရောက်​နေ ​တဲ့ ​မြန်​မာ​တစ်​ယောက်​ကို ​မ​တွေး​ပဲ​နဲ့ ​အ​တွေး​ထဲ ​အ​လို​လို ​ရောက်​လာ​မှာ​ပါ။ ​ကျ​နော်​တို့ ​ထိုင်း​နိုင်​ငံ​မှာ ​ရောက်​နေ​တယ်၊ ​မ​လေး​ရှား​မှာ ​ရောက်​နေ​တယ်။ ​စ​လုံး​မှာ​ရောက်​နေ​တယ်။ ​ဘယ်​မှာ​ပဲ ​ရောက်​နေ​ပါ​စေ။ ​ကို့​အ​ချင်း​ချင်း​တွေ့​ရင် ​ကိုယ့်​မြန်​မာ​စ​ကား​ကို ​မြတ်​မြတ်​နိုး​နိုး ​အား​ပါး ​တ​ရ ​ပြော​ဖြစ်​ခဲ့​တယ်။ ​တ​ချိန်​ချိန်​မှာ ​အ​ခွင့်​အ​ရေး​ရ​ရင် ​ငါ​က​မြန်​မာ​ကွ ​ဆို​တဲ့ ​စိတ်​နဲ့ ​တစ်​ခု​ခု​တော့ ​လုပ်​ပြ​ကြည့်​ချင်​တဲ့​စိတ် ​ပေါ်​လာ​တတ်​ပါ​တယ်။ ​ကျ​နော်​တို့ ​နိုင်​ငံ​တိုး​တက်​ဖို့ ​သူ​များ​အ​ရေး​ပဲ ​လိုက်​လုပ်​ပေး​နေ​တာ​ချည်း​ပဲ ​နိုင်​ငံ​တိုး​တက်​ဖို့​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး။ ​ခု ​ကျ​တဲ့ ​နေ​ရာ​မှာ ​ဘယ်​နိုင်​ငံ ​ဘယ်​ဌာ​န ​ဘယ်​နေ​ရာ​မှာ​ပဲ ​ကျ​နေ​ကျ​နေ ​ကို​ကျ​တဲ့​နေ​ရာ​မှာ ​ထူး​ချွန်​လာ​အောင် ​အဲ့​ဒီ့​ကျ​တဲ့​နေ​ရာ​က ​အ​လုပ်​တစ်​ခု​ကို ​ပ​ညာ​ရပ်​တစ်​ခု​အ​နေ​နဲ့ ​ရှု့​မြင်​သုံး​သပ်​ပြီး ​ရ​အောင်​ယူ​ခဲ့​မယ်​ဆို​ရင်​လည်း ​နောက်​တစ်​ချိန်​မှာ ​ကျ​နော်​တို့​နိုင်​ငံ​ကြီး​မှာ ​အဲ့​ဒီ့​ယူ​ခဲ့​တဲ့ ​ပ​ညာ​ရပ်​တစ်​ခု​ကို ​တစ်​ထောင့်​တစ်​နေ​ရာ​က ​လို​အပ်​လာ​ခဲ့​မှာ​ပါ။ ​အဲ့​ဒီ့​အ​ချိန်​မှာ ​အဲ့​ပ​ညာ​ရပ်​တစ်​ခု​ကို ​ကိုယ့်​နိုင်​ငံ​သား​ထဲ​မှာ​ပဲ ​ရှိ​မယ်​ဆို​ခဲ့​ရင် ​နိုင်​ငံ​ခြား​သား ​ငှား​နေ​စ​ရာ​မ​လို​တော့​ပါ​ဘူး။ ​ဒါ​ဟာ​လည်း ​တစ်​ထောင့်​တစ်​နေ​ရာ​က​နေ ​တိုး​တက်​ဖို့ ​ကြိုး​ပမ်း​မှု့​တစ်​ခု​ပါ​ပဲ။ ​ကိုယ့်​နိုင်​ငံ​တိုး​တက်​ဖို့ ​ကိုယ့်​ဝမ်း​စာ​ရှာ​ရင်း ​ရုန်း​ကန်​ရင်း​က​နေ ​လုပ်​သွား​လို့​ရ​ပါ​တယ်။ ​ပ​ရ​ဟိ​တ​အ​လုပ် ​လိုက်​လုပ်​နေ​မှ​ရယ်​လို့ ​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး။ ​အား​လုံး​က ​ရှု့​မြင်​တတ်​ခဲ့​ရင် ​ကိုယ့်​နိုင်​ငံ​တိုး​တက်​ဖို့ ​အ​တွက် ​တစ်​နည်း​မ​ဟုတ် ​တစ်​နည်း ​ကြိုး​စား​ချင်​ကြ​တဲ့​သူ​ချည်း​ပါ​ပဲ။ ​ထိုင်း​နိုင်​ငံ​မှာ​ဆို​ရင် ​အ​လုပ်​ရှင်​က​ပေါ​များ​ပြီး ​လုပ်​မယ့် ​အ​လုပ်​ကြမ်း​သ​မား​က ​များ​ပါ​တယ်။ ​တ​ကယ်​တမ်း​စက်​ရုံ​တစ်​ရုံ​ကို ​လုပ်​ရ​တာ ​အ​လုပ်​ကြမ်း​သ​မား​တွေ​ပါ။ ​အ​လုပ်​ရှင်​က ​အ​လုပ်​တစ်​ခု​ရဲ့ ​ပြ​သ​နာ​နဲ့ ​ကျွမ်း​ကျင်​မှု့​ကို ​မ​သိ​ရှိ​နိုင်​ပါ​ဘူး။ ​အဲ့​ဒီ့ ​အ​လုပ်​ကြမ်း​သ​မား​တွေ​ထဲ​မှာ ​မြန်​မာ​က 60% ​လောက်​ပါ​ပါ​တယ်။ ​တစ်​ချိန်​ချိန်​မှာ ​အဲ့​လို ​စက်​ရုံ​မျိုး​သာ ​မြန်​မာ​ပြည်​မှာ ​ဆောက်​ခဲ့​ရင် ​ကျ​နော်​တို့​မှာ​သာ ​အဲ့​စက်​ရုံ​မှာ ​လုပ်​ဖို့ ​ကျွမ်း​ကျင် ​အ​လုပ်​ကြမ်း​သ​မား​တွေ​သာ ​မ​ရှိ​ခဲ့​ရင် ​ကျွမ်း​ကျင်​နိုင်​ငံ​ခြား​အ​လုပ်​ကြမ်း​သ​မား​တွေ ​ငှား​ရမ်း​ရ​ဦး​မှာ​ပါ​ပဲ။ ​တ​ချိန်​တုန်း​က ​မြန်​မာ​ပြည်​က​နေ ​အိ​န္ဒိ​ယ​နိုင်​ငံ​သား​တွေ​ကို ​လယ်​လုပ်​ဖို့ ​ငှား​ရမ်း​ခဲ့​ရာ​က​နေ ​မြန်​မာ​ပြည်​မှာ ​အိ​န္ဒိ​ယ​နိုင်​ငံ​သား​တွေ ​စ​တင်​ရောက်​ရှိ​လာ​ခဲ့​တယ်​ဆို​တာ ​သ​မိုင်း​မှာ ​သင်​ခဲ့​ဖူး​ကြ​ပါ​တယ်။ ​တ​ချိန်​မှာ ​အဲ့​ဒီ့ ​အ​လုပ်​သ​မား​ပြ​သ​နာ​တွေ​ဟာ ​ဖြစ်​လာ​ဦး​မှာ​ပါ။ ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​ကျ​နော်​တို့​နိုင်​ငံ​က ​လို​အပ်​လာ​မယ့် ​အ​လုပ်​သ​မား​တွေ​ကို ​ကျ​နော်​တို့ ​နိုင်​ငံ​သား​တွေ ​နဲ့​သာ ​ဖြည့်​တင်း​နိုင်​ခဲ့ ​မယ် ​ဆို​ရင် ​ရ​လာ​မယ့် ​လ​စာ​ငွေ​ကြေး​ဟာ ​ပြည်​တွင်း​သုံး​စွဲ​ဖို့​အ​တွက်​ပါ​ပဲ။ ​ပြည်​ပ​ကို​ပို့​ဖို့ ​ပြည်​ပ​မှာ ​ကိုယ့်​မိ​သား​စု​မှ ​မ​ရှိ​တာ။ ​အ​ရာ​ရာ​ကို ​တ​ဖက်​သတ်​မ​တွေး​ဘဲ ​ရိုး​ရိုး​လေး ​ရှု့​မြင်​သုံး​သပ်​ကြည့်​မယ်​ဆို​ရင် ​လက်​သန်း​က ​လက်​သန်း​အ​လျှောက် ​လက်​ညိုး​ဟာ ​လက်​ညိုး​အ​လျှောက် ​အ​သုံး​ဝင်​ပါ​တယ်။ ​အား​လုံး​ပဲ ​ရွှင်​လမ်း​ချမ်း​မြေ့ ​ကြ​ပါ​စေ .....
​တ​ချို့​ဝဘ်​ဆိုက်​တွေ​မှာ ​ကျ​နော် ​မြင်​တွေ့​နေ​ရ၊ ​ဖတ်​နေ​ရ​ပါ​တယ်။ Software ​တင်​ပေး​နေ​တဲ့ ​ကျ​နော်​တို့​လို ​ဝဘ်​ဆိုက်​တွေ​က ​သူ​တို့​ရဲ့ ​ရန်​သူ​လို ​သ​ဘော​နေ​ကြ​တယ်။ ​လက်​ညိုး​ထိုး​ချင်​ကြ​တယ်။ ​ကျ​နော်​တို့ ​စ​တင်​လေ့​လာ​ခဲ့​တာ​မှ​သည် ​ခု​ချိန်​အ​ထိ​မှာ ​အင်​တာ​နက်​စ​သုံး​တုန်း​က Download ​လုပ်​တာ​တောင် ​မ​လုပ်​တတ်​ခဲ့​ဘူး။ ​အဲ့​အ​ချိန် ​တစ်​ယောက်​ယောက်​ရဲ့ ​ကျေး​ဇူး​ကြောင့် ​သိ​ခဲ့​ရ​ရင်​ပျော်​ခဲ့​တယ်။ software ​ဆို​တာ ​ကို​လို​ချင်​တဲ့ software ​ကို ​ရှာ​ဖို့​မ​ပြော​နဲ့ ​ဘာ program ​က ​ဘာ​အ​တွက် ​သုံး​တယ် ​ဆို​တာ​တောင်​မှ ​သေ​သေ​ချာ​ချာ ​ဂ​ဃ​န​ဏ ​မ​သိ​ခဲ့​တော့ software ​ရှာ​ဖို့​ဆို​တာ ​ဝေ​လာ​ဝေး​ပါ။ ​ခု ​မြန်​မာ​ပြည်​က ​လူ​ငယ်​တွေ ​သုံး​နိုင်​ဖို့ crack version ​တွေ ​တင်​ပေး​နေ​တဲ့ ​ကျ​နော်​တို့​ဟာ​ပဲ ​ကြီး​လေး​တဲ့ ​အ​ပြစ်​ကြီး​တစ်​ခု​ကို ​ကျူး​လွန်​ထား​သ​လို​လို၊ program ​ကို ​သုံး​စေ​ချင်​လို့ ​ရှာ​ပေး​တာ​က​ပဲ ​နည်း​ပ​ညာ​လော​က​ကို ​အ​မှောင်​တိုက် ​ဖုံး​အောင် ​လုပ်​မည့်​သူ​တွေ​လို ​ထင်​မြင်​သုံး​သပ်​နေ​ကြ​တာ​ဟာ ​တ​ကယ့်​ကို ​စိတ်​ပျက်​စ​ရာ​ပါ​ပဲ။ ​အ​ရာ​ရာ​ကို ​အ​ကောင်း​ဖက်​က ​မ​မြင်​ဘဲ ​အ​ဆိုး​ဘက်​က​ချည်း​ပဲ ​မ​တွေး​သင့်​ပါ​ဘူး။ ​တ​ကယ်​တော့ ​ကျ​နော်​တို့​တွေ​ဟာ ​ခ​ရီး​သည်​တွေ ​ဖြတ်​ကူး​မှု့​လွယ်​ကူ​စေ​ဖို့​အ​တွက် ​ခင်း​ပေး​ထား​တဲ့ ​တံ​တား​တစ်​ခု​ပါ​ပဲ။ ​ဖြတ်​ကူး​အ​နင်း​ခံ​ရ​တဲ့​သူ ​အ​ချင်း​ချင်း၊ ​တစ်​ခြား​ကိုယ့်​လူ​မျိုး​တွေ ​အ​ဆင်​ပြေ​စေ​မယ့် ​နည်း​လမ်း​တွေ​ကို ​ရှာ​ကြံ​ကြ​တဲ့​သူ​အ​ချင်း​ချင်း Online ​က software ​တင်​ပေး​တဲ့ ​သူ​တွေ​ကို ​ရန်​သူ​ကြီး​တစ်​ယောက်​လို၊ ​မြန်​မာ​ပြည် IT ​လော​က​ကို ​အ​မှောင်​တိုက်​ဖုံး​ပေး​မယ့် ​မီး​ခိုး​တွေ​လို​မျိုး ​စွပ်​စွဲ​ပြော​ဆို​တာ​ဟာ ​မ​ဖြစ်​သင့်​ဘူး​လို့ ​ကျ​နော့်​အ​နေ​နဲ့ ​ရှု့​မြင်​သုံး​သပ်​ပါ​တယ်။ ​စာ​ဖတ်​သူ​အ​နေ​နဲ့​ကော ​ဘယ်​လို ​ထင်​မြင်​ပါ​သ​လဲ။ ​ထင်​မြင်​ယူ​ဆ​ချက်​ကို ​ကွန်​မန့်​ရေး​ခဲ့​နိုင်​ပါ​တယ်။ ​ကျ​နော်​တစ်​ဦး​တည်း ​သုံး​သပ်​မှု့​က ​မှား​ယွင်း​နေ​ခဲ့​မယ်​ဆို​ရင် ​ဝိုင်း​ဝန်း​ထောက်​ပြ​ပေး​ဖို့ ​မေ​တ္တာ​ရပ်​ခံ​ပါ​တယ်။
IDM fake serial number ​ပြ​ဿ​နာ ​ဖြေ​ရှင်း​နည်း
IDM ​သုံး​တဲ့​သူ​ငယ်​ချင်း​များ ​အား​လုံး​ပဲ့ ​အဲ​ဒီ ​ပြ​သ​နာ​ကို ​ကြုံ​တွေ့ ​နေ​ရ​ပြီး ​တော်​တော်​လေး​ကို ​အ​ခက်​တွေ့ ​နေ​ပါ​တယ် ​အဲ​ဒီ​ပြ​သ​နာ​ကို ​ဘယ်​လို​မျိုး​ဖြေ​ရှင်း​ရ​မ​လဲ ​ဆို​တာ​ကို ​ကျွန်​တော် ​အောက်​မှာ ​ပုံ​နဲ့ ​တ​ကွ ​ရှင်း​ပြ​ထား​ပါ​တယ်
​ပ​ထ​မ​ဦး​စွာ​မိ​မိ​စက်​ထဲ​မှာ ​ရှိ​တဲ့ IDM ​ကို​အ​ရင်​ဖြုတ်​ရ​မှာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။​အဲ​လို​မျိုး​ဖြုတ်​ဖို့ ​အ​တွက် Revo uninstaller, advanced uninstaller, your uninstaller ​စ​တဲ့ uninstaller ​တွေ့ ​နဲ့ ​ဖြုတ်​တာ ​ပို​ပြီး​တော့​ကောင်း​ပါ​တယ်။ Control panel ​ထဲ​က Program and features ​ထဲ​က​ရော​ဖြုတ်​လို့ ​မ​ရ​ဘူး​လား​လို့ ​မေး​ချင်​မေး​ပါ​လိမ့်​မယ်​ဖြုတ်​တာ​က​တော့ ​ကြိုက်​တာ​နဲ့ ​ဖြုတ်​လို့​ရ​ပါ​တယ် IDM ​ကို Control panel ​ထဲ​မှာ​ရှိ​တဲ့ Program and features ​နဲ့​ဖြုတ်​မယ်​ဆို​လို့ ​ရှိ​လျှင် ​ကိုယ်​ဖြုတ်​ချင်​တဲ့ Program ​ရဲ့ data ​တွေ​ကို​အ​ကုန်​လုံး​ကို ​ဖျက်​ပေး​မ​နိုင်​ပါ​ဘူး ​အဲ​တာ​ကြောင့် ​စော​စော​က ​ကျွန်​တော် ​ပြော​ခဲ့​တဲ့ uninstaller ​တွေ​နဲ့ ​ဖြုတ်​ခိုင်း​တာ​ပါ။​ကျွန်​တော်​က advanced uninstaller ​ကို​အ​သုံး​ပြု​ပြီး​တော့ IDM ​ကို​ဖြုတ်​ပြ​ပါ​မယ်... ​ပုံ(၁) ​တွင်​ကြည့်​ပါ
​ပုံ(၁) ​ပုံ(၁)​တွင်​ပြ​ထား​သည့်​အ​တိုင်း advanced uninstaller ​ကို​ဖွင့်​ပြီး ​ညာ​ဘက်​ထောင့်​မှာ ​အ​ဝါ​ရောင် ​လေး​နဲ့ uninstaller program ​ကို click ​တစ်​ချက်​နှိပ်​လိုက်​လျှင် ​ပုံ (၂) ​တွင် ​ပြ​ထား​သည့်​အ​တိုင်း​မြင်​တွေ့ ​ရ​မှာ​ပါ
​ပုံ(၂) ​တွင်​ပြ​ထား​သည့်​အ​တိုင်း IDM ​ကို click ​တစ်​ချက်​ထောင့်​ပြီး ​လက်​ညှိး​ထိုး​ပြ​ထား​တဲ့ Uninstaller ​ဆို​တာ​ကို ​ဆက်​နှိပ်​လျှင် ​အောက်​က​မှာ​ပြ​ထား​တဲ့ ​ပုံ (၃) ​က​အ​တိုင်း​မြင်​တွေ့ ​ရ​မှာ​ပါ
​တစ်​ခု​သ​တိ​ထား​ရ​မှာ IDM ​ကို​ဖြုတ်​တဲ့​အ​ချိန်​မှာ Internet Download Manager ​ကို ​ပိတ်​ထား​ဖို့ ​လို​ပါ​တယ် ​တ​ကယ်​လို​များ​မ​ပိတ်​ထား​ဘူး​ဆို​လို့​ရှိ​ရင် Uninstall ​လုပ်​ခွင့်​ပေး​မှာ​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး ​သ​တိ​ထား​စေ​ချင်​ပါ​တယ်​အောက်​က​ပုံ​တွင် ​ပုံ (၄) ​တွင်​ဆက်​ကြည့်​ပါ
​ပုံ (၅)​တွင်​ပြ​ထား​သည့်​အ​တိုင်း finish ​ကို​ဆက်​နှိပ်​ပါ
​ပုံ(၅)​တွင်​ပြ​ထား​သည့်​အ​တိုင်း finish ​ကို​နှိပ်​လိုက်​လျှင် ​အောက်​က ​ပုံ(၆)​တွင်​ပြ​ထား​တဲ့ Massage Box ​လေး​ပေါ်​လာ​ပါ​လ်ိမ့်​မည် Ok ​ကို​မ​နှိပ်​ပဲ Cancel ​ကို​နှိပ်​ပါ​တ​ကယ်​လို့ ​များ​မှား​ပြီး​တော့ Ok ​ကို ​နှိပ်​မယ်​ဆို​လို့ ​ရှိ​ရင် ​ကွန်​ပျူ​တာ​ဟာ Restart ​ကျ​သွား​မှာ​ဖြစ်​ပြီး​တော့ IDM ​ကို Uninstall ​လုပ်​တာ​လည်း ​အ​ထဲ​က Data ​တွေ​ကို​ကုန်​စင်​အောင် ​ဖျက်​ပေး​မှာ​မ​ဟုတ်​တော့​ဘူး​အဲ​တာ​ကြောင့် Cancel ​ကို​နှိပ်​ခိုင်း​တာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်...​ပုံ(၆) ​တွင်​ကြည့်​ပါ
​ပုံ(၇)​က​အ​တိုင်း next ​ကို​ဆက်​နှိပ်​ပါ
​အောက်​က​ပုံ (၈) ​အ​တိုင်း next ​ကို​ဆက်​နှိပ်​ပါ
​ပုံ(၉)​တွင်​ပြ​ထား​သည့်​အ​တိုင်း ​ဘယ်​ဘက်​အောက်​နား​လေး​မှာ​ရှိ​တဲ့ select ​ကို click ​တစ်​ချက်​နှိပ်​ပြီး select all ​ဆို​တာ​လေး​ကို ​ရွေး​ပေး​လိုက်​ပါ​ပြီး​လျှင် next ​ကို​ဆက်​နှိပ်​ပါ
​ပုံ(၁၀)​မှာ​လည်း ​ပုံ(၉)​တွင်​ပြော​ခဲ့​သ​လို​ပဲ့ select ​တွင် select all ​ဆို​တာ​ကို​ရွေး​ပေး​ပြီး next ​ကို​ဆက်​နှိပ်​ပါ
​ပုံ (၁၀)​တွင်​ပြ​ထား​သည့်​အ​တိုင်း next ​ကို​ဆက်​နှိပ်​လိုက်​ပါ ​ပြီး​လို့​ရှိ​ရင် Ok ​ပေါ်​လာ​ပါ​လိမ့်​မည် Ok ​ကို ​ဆက်​နှိပ်​ပါ...​ပြီး​လျှင် computer ​ကို Restart ​ချ​လိုက်​ပါ။Restart ​ချ​ပြီး​ပြန်​တက်​လာ​လျှင် IDM ​ကို Uninstall ​လုပ်​တာ​ပြီး​ဆုံး​သွား​ပါ​ပြီ။​အ​ခု​ဆက်​လုပ်​ရ​မှာ​က hots ​ဖိုင်​ကို Download ​လုပ် ​ရ ​မှာ ​ဖြစ်​ပါ​တယ် hots ​ဖိုင်​ကို ​ယူ​ပါ...​ပြီး​ရင် IDM ​နောက်​ဆုံး​ထွက် version ​ကို download ​လုပ်​ယူ​ပါ။ Download ​လုပ်​ပြီး​လျှင် Internet ​ကို​ခ​ဏ​ပိတ်​ထား​ပါ။Download ​လုပ်​လို့ ​ရ​လာ​တဲ့ hots ​ဖိုင်​ကို​အ​ရင်​ဆုံး copy ​ကူး​ပြီး​တော့ computer ​ထဲ​က (C:\_Windows\_system32\_drivers\_etc\_)​ထဲ​မှာ​ရှိ​တဲ့ hots ​ဖိုင်​ကို​ဖျက်​ထုတ်​လိုက်​ပြီး​တော့ Download ​လုပ်​လို့ ​ရ​လာ​တဲ့ hots ​ဖိုင်​ကို​ထည့်​ပါ ​အောက်​က ​ပုံ(၁၁)၊ (၁၂)၊ (၁၃)၊ (၁၄)၊ (၁၅)၊ (၁၆) ​တွင်​ကြည့်​ပါ
​ပုံ(၁၆) ​မှာ​ပြ​ထား​သည့်​အ​တိုင်း hots ​ဖိုင်​ကို​ဖျက်​ထုတ်​ပြီး Download ​လုပ်​လို့ ​ရ​လာ​တဲ့ hots ​ဖိုင်​ကို ​အ​စား​ထိုး​ထည့်​ပေး​လိုက်​ပါ။ ​ပြီး​လို့ ​ရှိ​ရင်​ဒု​တိ​ယ Download ​လုပ်​လို့ ​ရ​လာ​တဲ့ IDM ​ကို Install ​လုပ်​ပါ။​အ​ရင်​က​လုပ်​နေ​တဲ့​ပုံ​စံ​အ​တိုင်း patch ​ဖိုင်​ဖြင့် license ​ဖြစ်​အောင်​ပြု​လုပ်​ပါ။​ပြီး​လျှင် start menu button ​ထဲ​ကို​ဝင်​ပြီး Internet Download Manager ​ကို right click ​ထောင့်​ပြီး run as administrator ​ကို click ​တစ်​ချက်​ပြီး​ဖွင့်​ပါ...​ပြီး​ရင် Internet ​ကို​ပြန်​ဖွင့်​ပြီး​အ​သုံး​ပြု​နိုင်​ပါ​ပြီ ​အ​ဆင်​မ​ပြေ​မှု​များ ​ရှိ​ပါ​က ​အောက်​က comment box ​တွင်​မေး​မြန်း​နိုင်​ပါ​တယ်....​အ​ဆင်​ပြေ​ကြ​ပါ​စေ ​လို့​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်....
​အောက်​က​လင့်​တွင် Internet Download Manager ​နောက်​ဆုံး​ထွက် version ​ကို Download ​လုပ်​ယူ​ပါ
Direct link| Zippyshare | Filecloud | Sharebeast
hots ​ဖိုင်​ကို​လည်း​အောက်​က​လင့်​တွင် Download ​လုပ်​ယူ​လိုက်​ပါ။
Zippyshare | Rapidshare | Filecloud
IDM fake serial number ​ပြ​ဿ​နာ
​အား​လုံး​ပဲ ​ဒီ​ပြ​သ​နာ​ကို ​ရင်​ဆိုင်​ရ​လိမ့်​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်. IDM ​သုံး​တဲ့​သူ​တိုင်း ​တွေ့​ကြို​ရ​မှာ​ပါ. ​မေး​ထား​တဲ့​သူ ​အ​ကူ​အ​ညီ​တောင်း​ထား​တဲ့​သူ​တွေ​လည်း ​နည်း​နည်း​များ​တာ​မို့ ​ကျ​နော် ​ပို့စ်​အ​ဖြစ် ​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ်.
Revo uninstaller, advanced uninstaller, your uninstaller ​မိ​မိ​ကြိုက်​နှစ်​သက်​တဲ့ uninstaller ​ဖြင့် IDM ​ကို ​ဖြုတ်​ထုတ်​လိုက်​ပါ။ ​သ​တိ​ထား​ရ​မည့် ​အ​ချက်​က​တော့ ​ဖြုတ်​ထုတ်​တဲ့​အ​ဆင့်​နောက်​ဆုံး​အ​ဆင့်​မှာ restart ​လုပ်​မှာ​လား​ဆို​တဲ့ Message box ​ပေါ်​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ် ​အဲ့​ဒါ​ကို cancel ​ပေး​ဖြစ်​အောင်​ပေး​ပါ။ ​မ​ဟုတ်​ရင် registry ​ထဲ​က ​ဖိုင်​ကို delete ​လုပ်​ဖို့​အ​ဆင့်​ကို ​ရောက်​မှာ​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး။ ​အဲ့​အ​ဆင့်​မှာ cancel ​ပေး​ပြီး​တာ​နဲ့ registry ​ထဲ​က IDM ​ဖိုင်​တွေ​ကို ​ဖျက်​ထုတ်​ပစ်​လိုက်​ပါ။
​ကွန်​ပျူ​တာ​ကို restart ​ချ​လိုက်​ပါ။
hosts file ​ကို copy ​ကူး​ထည့်​ပြီး​တော့ (C:\_Windows\_system32\_drivers\_etc\_hosts) ​ဖိုင်​ကို ​ဖျက်​ထုတ်​ပစ်​ပြီး​တော့ ​ခု​ပေး​လိုက်​တဲ့ hosts ​ဖိုင်​ကို ​အ​စား​ထိုး​ထည့်​လိုက်​ပါ။
IDM ​နောက် ​ဆုံး​ထွက် version ​ကို install ​လုပ်​ပြီး​တော့ ​အ​ရင်​တုန်း​က​အ​တိုင်း​ဘဲ patch file ​နဲ့ license version ​ဖြစ်​အောင်​လုပ်​လိုက်​ပါ။
license version ​ဖြစ်​အောင်​လုပ်​ပြိး​သွား​ရင်​တော့ IDM ​ကို right click ​ထောက်​ပြီး run as administrator ​နဲ့ ​ဖွင့်​လိုက်​ပါ။
​ပြီး​လျှင် ​အင်​တာ​နက် ​ပြန်​ချိတ်​ပြီး​တော့ ​အ​သုံး​ပြု​နိုင်​ပါ​ပြီ။
​ကဲ ​အား​လုံး​ပဲ ​ခ​ဏ​ခ​ဏ message box ​မ​ပေါ်​လာ​နိုင်​တော့​ပါ​ဘူး။ ​အား​လုံး​ပဲ ​အ​ဆင်​ပြေ​နိုင်​ကြ​လိမ့်​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​မိ​ပါ​တယ်။
Gold Styles ​စ​တိုင်း​လေ ​မိုက်​လောက်​လို့​တင်​လိုက်​တယ် Photoshop ​သုံး​တဲ့​သူ​များ​တွက် ​သုံး​ဝင်​တယ် ​အောက်​မှာ downlord ​ဆွဲ​နိုင်​ပါ​တယ်။
Google Drive | Sharebeast | Zippyshare | Filecloud
​စာ​အုပ်​အ​မည်းMicrosoft Access 2010 ​ဖြင့် Database program
​ရေး​သား​သူး​ကို​မြန်​မာ
​အ​မျိုး​အ​စားးPdf
​အ​ရွယ်​အ​စား6း.95 MB
​တော်​တော်​များ​များ Microsoft office ​ကို​သိ​ကြ​မှာ​ပါ။​အ​သုံး​များ​တဲ့ Software ​တစ်​ခု​လည်း​ဖြစ်​ပါ​တယ်။Database ​တည်​ဆောက်​လို့​ရ​တယ်၊Program ​ရေး​လို့​ရ​တယ်၊Access 2010 ​ကို​သုံး​ပြီး Database Program ​ဘယ်​လို​တည်​ဆောက်​ရ​မ​လဲ​ဆို​တာ ​ပုံ​နဲ့​တ​ကွ​ရှင်း​ပြ​ပေး​ထား​တဲ့ ​စာ​အုပ်​လေး​မို့ ​စိတ်​ဝင်​စင်​စား​တဲ့​သူ​များ​အ​တွက် ​နား​လည်​လွယ်​တဲ့ ​စာ​အုပ်​ကောင်း​လေး​တ​အုပ်​ပါ။ Access 2010 ​ကို​လေ့​လာ​ချင်​တဲ့​သူ​များ ​အောက်​မှာ Downloads ​လုပ်​ယူ​သွား​ကြ​ပါ။ ​အား​လုံး​ဆင်​ပြေ​ကြ​ပါ​စေ​ဗျာ။
ZippyShare | Filecloud | Ziddu | ShareBeast | SppedyShare
​စာ​အုပ်​အ​မည်းAdobePremiereProCS5 Practical Exercises
​ရေး​သား​သူး​ဦး​အောင်​လင်း ( B.E, Electronics )
​စာ​အုပ်​အ​မျိုး​အ​စားးPDF
​စာ​အုပ်​အ​ရွယ်​အ​စားး10.2 MB
AdobePremiereProCS5 Program ​ကို ​အ​ခြေ​ခံ​ထား​ပြီး Video Effect ​အ​ထူး​ပြု​လုပ်​ချက် ​လေ့​ကျင့်​ခန်း​တွေ၊ ​ကား​ကူး​ကား​ဆက်​ဖြစ်​တဲ့ Transition ​နဲ့ ​ပတ်​သက်​ပြီး 3D video Transition ​တွေ​ကို ​ထည့်​သွင်း​နည်း​နဲ့ ​အ​သုံး​ပြု​နည်း​တွေ​ကို​လည်း ​ရေး​သား​ထား​ပါ​တယ်။ ​အဲ​ဒီ​အ​ပြင် ​ဗီ​ဒီ​ယို​ကင်​မ​ရာ​နဲ့ ​ပတ်​သက်​တဲ့ ​ဗ​ဟု​သု​တ​တွေ​ကို​လည်း ​ထည့်​သွင်း​ရေး​သား​ထား​တာ​ကြောင့် Video Editing ​ပ​ညာ​ကို ​လေ့​လာ​သူ​များ​အ​တွက် AdobePremiereProCS5 ​အ​သုံး​ပြု​နည်း​စာ​အုပ်​ကို ​မြန်​မာ​ဘာ​သာ​ဖြင့် ​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ်။ ​လို​ချင်​သူ​တွေ ​အောက်​က ​ကြိုက်​တဲ့​လင့်​က​နေ Download ​လုပ်​ယူ​နိုင်​ပါ​တယ်။
Zippyshare | Rapidshare | Filecloud | Sharebeast
PC ​မှာ viber ​ကို ​မြန်​မာ​စာ​ရိုက်​ပြီး ​အ​သုံး​ပြု​ချင်​လျှင်
viber ​ကို ​ပ​ထ​မ​ဦး​စွာ install ​လုပ်​လိုက်​ပါ။
control panel ​ထဲ​က fonts folder ​ထဲ​တွင် ​အောက်​တွင်​ပေး​ထား​သည့် font ​ကို copy ​ကူး​ပြီး​ထည့်​လိုက်​ပါ။
​ပြီး​လျှင် viber ​တွင် ​မြန်​မာ​လို zawgyi keyboard ​ဖြင့် ​ရိုက်​ကြည့်​ပါ။ ​မြန်​မာ​စာ ​မ​မြင်​ရ​ဘဲ ​လေး​ထောင့်​ကွက်​သာ ​ဖြစ်​နေ​သေး​တယ် ​ဆို​ရင်​တော့ ​ကွန်​ပျူ​တာ​ကို restart ​ချ​လိုက်​ပါ။ ​ပြန်​ဖွင့်​လာ​တဲ့​အ​ချိန်​ကျ​လျှင် ​လက်​ကွက်​ရိုက်​ပြီး​စမ်း​ကြည့်​ပါ။ ​မြန်​မာ​လို ​မြင်​ရ​ပါ​ပြီ။
​အာက်​မှာ viber install ​လုပ်​နည်း​နှင့် font ​ထည့်​နည်း​ကို​ပါ ​ဓါတ်​ပုံ​နှင့်​ပြ​ထား​ပေး​ပါ​တယ်။ ​ရိုက်​လည်း​ရိုက်​ပြ​ထား​ပါ​တယ်။ ​အ​ဆင်​ပြေ​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်။
Direct Link | Google Drive
System ​ပိုင်း​မှာ ​ဒု​က္ခ​ရောက်​နေ​တဲ့ ​သူ​များ​အ​တွက် PC Cleaner Pro 2013 ​လေး​ပါ။ System ​ပိုင်း​ကို ​ပြု​ပြင့်​စစ်​ဆေး​ပေး​တဲ့ Software ​လေး​ပါ။ ​အ​သုံး​ရ​တာ​လည် ​လွယ်​ကူ​တယ်။ ​လို​ချင်​တဲ့​သူ​များ ​အောက်​မှာ Downloal ​လုပ်​ပါ။
Google Grive | Zippyshare | Ziddu | Sharebeast
Deep Freeze Enterprise v7.61
​ကွန်​ပျူ​တာ​ပ​ညာ​ကို ​လေ့​လာ​နေ​သူ​များ ​အ​နေ​ဖြင့် virus ​ကြောင့် ​ဖြစ်​လာ​တဲ့ error ​တွေ၊ ​ကိုယ်​တိုင်​လေ့​လာ​ရင်း​နဲ့ setting ​ပိုင်း​တွေ ​တ​ခု​ခု​ပြ​ဿ​နာ ​ဖြစ်​သွား​တာ​ပဲ့ ​ဖြစ်​ဖြစ် ​ပြ​ဿ​နာ​အား​လုံး​ကို ​ကွန်​ပျူ​တာ​ကို restart ​ချ​လိုက်​ရုံ​နဲ့ ​ပြေ​လည်​အောင် ​ကာ​ကွယ်​ပေး​နိုင်​တဲ့ Deep Freeze ​ဆော့​ဝဲ​လေး​တ​ခု​ကို ​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ်။ ​အ​သုံး​ပြု​နည်း​ကို ​နား​မ​လည်​တဲ့​သူ​တွေ​အ​တွက် ​အ​သုံး​ပြု​နည်း​ကို ​မြန်​မာ​ဘာ​သာ​နဲ့ ​ရေး​သား​ထား​တဲ့ ​စာ​အုပ်​ကို​ပါ ​တ​ခါ​တည်း ​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ်။ ​ဖိုင်​ဆိုက်​က​တော့ 22 MB ​ရှိ​ပါ​တယ်။ ​လို​ချင်​ရင်​တော့ ​အောက်​က ​ကြိုက်​တဲ့​လင့်​က​နေ Download ​လုပ်​နိုင်​ပါ​တယ်။
Rapidshare | FileCloud | Ziddu | Zippyshare
Format ​မျိုး​စုံ​ကို Software ​တစ်​ခု ​တည်း​နဲ့ ​မြန်​မြန်​ဆန် ​ဆန် ​ဟြေင်း​နိုင်​လို့ ​လူ​ကြိုက်​များ​တဲ့ FormatFactory 3.2 ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ format factory ​က ​မျိုး​စုံ​ရ​တော့ ​ဒီ converter ​ကို ​လူ​တိုင်း ​နီး​ပါး ​သုံး​ကြ​တာ​ကို ​တွေ့​ရ​ပါ​တယ်။ ​အ​သုံး​ရ​တာ ​လွယ်​ကူ​တယ်။ ​အောက်​မှာ Download ​လုပ်​ယူ​လိုက်​ပါ။
Adobe Premiere pro CS5 ​အ​သုံး​ပြု​နည်း
​စာ​အုပ်​အ​မည်းAdobe Premiere pro CS5 Practical Exercises
​ရေး​သား​သူ​အ​မည်း​အောင်​လင်း
​အ​ရွယ်​အ​စားး10.2MB
​ဒီ​စာ​အုပ်​လေး​က​တော့ Adobe Premiere Pro CS5 Program ​ကို ​အ​ခြေ​ခံ​ထား​ပြီး Video Effect ​အ​ထူး​ပြု​လုပ်​ချက်​လေ့​ကျင့်​ခန်း​များ ​ကို​အ​ဓိ​က​ထား​ပြီး ​ရေး​သား​ပေး​ထား​ပါ​တယ်။ ​ကား​ကူး​ကား​ဆက်​ဖြစ်​တဲ့ Transition ​နဲ့ ​ပက်​သက်​ပြီး ​နောက်​ဆုံး​ထွက်​ရှိ​လာ​တဲ့ 3D Video Transiton ​ကို Adobe Premiere pro CS5 Program ​ထဲ ​ထည့်​သွင်း​နည်း​နဲ့ ​အ​သုံ​ပြု​နည်း​တွေ​ကို​လည်း ​ရေး​သား​ပေး​ထား​တယ်။ ​အဲ​ဒီ 3D Video Transition ​တွေ ​ပါ​ဝင်​တဲ့ CD ​ကို​ဒီ​စာ​အုပ်​နဲ့ ​တ​ပါ​တည်း ​တွဲ​ပေး​ထား​တာ​ကြောင့် ​စာ​ဖတ်​သူ​နေ​နဲ့ 3D Video Transition ​တွေ​ကို ​သီး​ခြား​ဝယ်​ယူ​ဖို့ ​မ​လို​ဘဲ ​အ​လွယ်​တ​ကူ​ပဲ installtion ​လုပ်​ပြီး ​ထည့်​သွင်း​သုံး​ပြု​နိုင်​တယ်။ ​ရုပ်​ရှင်​ရိုက်​ကူး​သူ​တွေ ​အ​သုံး​ပြု​လေ့​ရှိ​တဲ့ Chroma Key ​ကို ​သုံး​ပြု​ပြီး ​ဇာတ်​ဝင်​ခန်း​တွေ ​ဖောက်​စွပ်​တဲ့​နည်း​တွေ​ကို​လည်း ​အ​သေး​စိတ် ​ရေး​သား​ပေး​ထား​တယ်။ ​စာ​ဖတ်​သူ​အ​နေ​နဲ့ ​အ​သေ​အ​ချာ​ဖတ်​ရှု​ပြီး ​လုပ်​သွား​မယ်​ဆို​ရင် ​ဆင့်​မီ​တဲ့ ​ရုပ်​သံ​တည်း​ဖြတ်​နည်း​တွေ​ကို ​ကျွမ်း​ကျင်​စွာ ​ပြု​လုပ်​သုံး​တတ်​သွား​မှာ​ပါ။ ​စာ​ဖတ်​အ​နေ​နဲ့ ​ကွန်​ပျူ​တာ​နှင့် ​ဗီ​ဒီ​ယို​တည်း​ဖြတ်​တဲ့ ​ဗ​ဟု​သု​တ​အ​ပြင် ​ဗီ​ဒီ​ယို​နဲ့​ပက်​သက်​တဲ့ ​ဗ​ဟု​သု​တ​တွေ​လည်း ​တစ်​ပါ​တည်း​နား​လည် ​သိ​ရှိ​လာ​မှာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ​ရုပ်​သံ​တည်း​ဖြတ်​နည်း​များ​ကို ​စိတ်​ဝင်​စား​တဲ့​သူ​များ ​အောက်​မှာ Download ​လုပ်​ယူ​သွား​ပါ။ Link ​များ ​မ​သေ​အောင် ​ပြု​လုပ်​ပေး​ထား​လို့ Download ​လုပ်​မယ်​သူ​များ​တွက် ​ဆင်​ပြေ​အောင် ​လုပ်​ပေး​ထား​ပါ​တယ်။
Google Drive | Mediafire | Direct Link
​စာ​အုပ်​အ​မည်း​ကွန်​ဗျူ​တာ​ရော​များ​နှင့်​ကာ​ကွယ်​ဆေး
​ရေး​သား​သူး​ကို​သန်း​ထိုက်
​အ​မျိုး​အ​စားး(pdf)
​အ​ရွယ်​အ​စားး(15.15 MB)
​ကွန်​ဗျူ​တာ ​အ​သုံး​ပြု​သူ​များ ​အိုင်​တီ​နည်း​ပ​ညာ​ရပ် ​များ​ကို ​လေ့​လာ​နေ​သူ​များ ​အ​တွက် ​ဗိုင်း​ရပ်စ်​ဆို​တာ ​ဘယ်​လို​လုပ်​ဆောင်​ပြီး ​ဘယ်​လို​ဖယ်​ထုတ်​မယ် ​ဘယ်​လို ​ကာ​ကွယ်​ထား​ရ​မ​လဲ​ဆို​တာ ​အ​သေး​စိတ်​ရှင်း​ပြ​ထား​သည့် ​မ​ရှိ​မ​ဖြစ် ​အ​သုံး​ပြု​ရန် ​အ​တွက် ​စာ​အုပ်​တစ်​အုပ် ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ​စိတ်​ဝင်​စား​သူ​များ ​အောက်​ပါ
Download Link ​များ​မှ Download ​ရ​ယူ​နိုင်​သည်။
Google Drive | Direct Link | Mediafire
Internet ​မှ download ​လုပ်​လို့​ရ​လာ​သော files ​များ​ဟာ ​များ​သော ​အား​ဖြင့် WinRAR ​နှင့် ​သိမ်း​ထား​တတ်​ပါ​တယ်။ antivirus program ​များ​မှ license version ​ဖြစ်​ရန်​ပြု​လုပ်​ပေး​နိုင်​သည့် patch, keygen, crack ​စ​သည့် ​တို့​ကို ​ဖျက်​ပစ်​တတ်​ပါ​တယ်။ ​အဲ့​လို ​ဖျက်​တဲ့​အ​ထဲ ​မ​ပါ​နိုင်​စေ​ရန် ​အ​တွက်​လည်း Winrar ​ကို ​သုံး​ကြ​သ​လို password ​ဖြင့် ​သိမ်း​ဆည်း​ထား​နိုင်​ရန် ​အ​တွက်​လည်း Winrar ​ကို ​အ​သုံး​ပြု​တတ်​ကြ​ပါ​တယ်။ ​မိ​မိ​စက်​ထဲ​တွင်WinRAR ​မ​ရှိ​သေး​တဲ့ ​သူ​များ ​အ​တွက် ​နောက်​ဆုံး​ထွက်WinRAR v5.00 version ​ကို ​တင်​ပေး​လိုက် ​ပါ​တယ်။ ​မ​ရှိ​မ​ဖြစ်​လို​အပ်​တဲ့ Softwares ​မို့​လို​ချင်​တဲ့​သူ​များ ​အောက်​မှာ download ​လုပ်​ယူ ​သွား​ပါ။​အား​လုံး​ဆင်​ဖြေ​ကြ​ပါ​စေ​ဗျာ။
Google Drive | Zippyshare | Sharebeast
​အဲ​ဒီ software ​လေး​က​တော့ format type ​တော်​တော်​များ​များ ​ကို​ပြောင်း​ပေး​နိုင်​တဲ့ video converter ​လေး​ဘဲ​ဖြစ်​ပါ​တယ် ။​ပြောင်း​ပေး​နိုင် ​တဲ့ format type ​များ​က​တော့ AVI, DivX, XviD, MPEG, DAT, WMV, ASF, RM, RMVB, MOV, QT, MP4, M4V, 3GP, FLV and MKV ​စ​တဲ့ format type ​တွေ​ကို support ​လုပ်​ပေး​နိုင်​တဲ့​အ​ပြင်​ဓာတ်​ပုံ format type ​များ​ဖြစ်​သောBMP.GIF.JPG.PNG ​စ​တဲ့Format type ​တွေ​ကို support​လုပ်​ပေး​နိုင်​ပါ​တယ်။Im Too Video Converter​ရဲ့ ​ထူး​ခြား​ချက်​မှာ​တ​ခြား Coveter ​တွေ​နဲ့ ​မ​တူ​ဘဲ Video clip ​တစ်​ခု​ကို​ဖြတ်​တောက်​လို့ ​ရ​သ​လို Video Clip ​တစ်​ခု​နဲ့ ​တစ်​ခု​ကို ​ချိတ်​ဆက်​လို့ ​ရ​ပါ​တယ်။​ဒါ့​အ​ပြင် Video colour effect ​တွေ​ကို​နှစ်​သက်​သ​လို​ပြောင်း​လဲ​အ​သုံး​ပြု​နိုင်​ပါ​တယ်။​လို​ချင်​တဲ့​သူ​များ​အောက်​မှာ Download ​လုပ်​နိုင်​ပါ​တယ်။
Advanced System Care_6.4.0.
​ဒီ​ကောင်း​လေး​က​တော့ Advanced System Car ​လေး​ဖြစ်​ပါ​တယ် ​အ​သစ်​လေး​ပေါ​ဗျား(22.2Mb)​သာ​သာ​လေး​ဘဲး​ရှိ​ပါ​တယ်​ဖျား system ​မှာ​ရှိ​တဲ ​ဗိုင်း​ရွတ်​တွေ​ကို​စစ်​ဆေး​ပေး​ပါ​တယ် ​သုံး​လို​တော့​တော်​ကောင်း​ပါ​တယ် ​ကျွန်​တော်​လဲး​လက်​ရှိ​သုံး​နေ​တယ် ​ကျွန်​တော့​ရဲ​သူ​ငယ်​ချင်း​တွေ​လဲး ​နှစ်​ယောက်​သုံး​ယောက်​လောက်​သုံး​နေ​တာ​တွေ့
​ပါ​တယ် ​ဒီ Website ​ကို​ကြည့်​နေ​တဲ့ ​သူ​ငယ်​ချင်း​တွေ​လဲး ​သုံး​ရ​အောင်း​တင်း​ပေး​လိုက်​တာ​ပါ ​နောက်​တော့ full version ​လဲး​ဖြစ်​တယ်​လေ
Google Drive | Media Fire | Zippy Share
Chrome Browser ​မှာ Zawgyi ​ဖြင့်​ရေး​ထား​သော website ​များ​အား ​ကောင်း​ကောင်း ​ရေး/​ဖတ်​လို့​မ​ရ​ရင်
browser ​တွေ ​အ​များ​ကြီး ​ရှိ​ပေ​မယ့် ​အ​ကြိုက်​ဆုံး browser ​က​တော့ chrome ​လို့​ပဲ ​ပြော​ရ​မှာ​ပဲ။ Chrome browser ​ရဲ့ ​အ​ဓိ​က ​အား​သာ​ချက်​က web page ​တစ်​ခု​လုံး​ကို ​မိ​မိ​ကြိုက်​နှစ်​သက်​တဲ့ ​ဘာ​သာ​စ​ကား​ကို translate ​လုပ်​ပေး​နိုင်​တဲ့ ​အ​ချက်​ပါ​ပဲ။ ​ရှာ​ဖွေ​တဲ့ ​နေ​ရာ​မှာ ​မြန်​လည်း​မြန်​တော့ ​နောက်​မှ ​ထွက်​လာ​တဲ့ browser ​ဖြစ်​ပေ​မယ့်။ ​လူ​သုံး​အ​များ​ဆုံး​နှင့် ​လူ​ကြိုက်​အ​များ​ဆုံး browser ​ဖြစ်​သွား​တာ ​သိပ်​တော့​ဖြင့် ​မ​ထူး​ဆန်း​လှ​ပါ​ဘူး။ chrome ​ကို ​သုံး​နေ​ပေ​မယ့် zawgyi ​ဖြင့် ​ရိုက်​လို့​မ​ရ​တာ။ ​စာ​ဖတ်​ရင် ​မ​မြင်​ရ​တာ​တွေ​ကို ​အောက်​မှာ ​တ​ဆင့်​ချင်း ​ရှင်း​ပြ​ထား​ပေး​ပါ​တယ်။ ​အောက်​မှာ ​ကြည့်​ပြီး ​လုပ်​ကြည့်​လိုက်​ပါ။
​အောက်​ပါ ​လုပ်​ဆောင်​ချက် (၂) ​ဆင့်​ကို ​လုပ်​ဆောင်​လိုက်​ပါ။ ​ပ​ထ​မ​အ​ဆင့်​က font settings ​ဝင်​ပြင်​ခြင်း​နှင့် ​ဒု​တိ​ယ​အ​ဆင့် Chrome Browser ​ရဲ့ Css ​မှာ Zawgyi ​ကို font family ​အ​ဖြစ်​ကြေ​ငြာ​ခြင်း ​စ​သည့် (၂) ​ဆင့်​ကို ​လုပ်​ဆောင်​လိုက်​လျှင် ​အ​ဆင်​ပြေ​ပြေ​ဖြင့် ​စာ​ရိုက်​ခြင်း၊ website ​မှာ ​ရှာ​ဖွေ​ခြင်း ​တွေ​ကို zawgyi ​ဖြင့် ​ကောင်း​စွာ ​အ​လုပ်​လုပ်​နိုင်​မှာ​ပါ။
Font Settings ​မှာ ​ဝင်​ပြင်​ခြင်း
၁။ Chrome browser ​ကို​ဖွင့်​ပြီး settings ​ထဲ​ကို ​ဝင်​လိုက်​ပါ။
​ပုံ(၁) ​ပုံ​ကြီး ​မ​မြင်​ရ​လျှင် ​ပုံ​ကို​နှိပ်​လိုက်​ပါ။
၂။ Settings ​ထဲ​သို့ ​ရောက်​လျှင် ​အောက်​ဆုံး​ကို ​ဆွဲ​ချ​လိုက်​ပါ။ ​ဒါ​ဆို​ရင် Show advanced settings ​ဆို​တာ​ကို ​တွေ့​ရ​ပါ​လိမ့်​မယ်။ ​နှိပ်​လိုက်​ပါ။
​ပုံ(၂) ​ပုံ​ကြီး​မ​မြင်​ရ​လျှင် ​ပုံ​ကို​နှိပ်​လိုက်​ပါ။
၃။ ​ပုံ(၃)​အ​တိုင်း Customize fonts ​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ။
​ပုံ(၄) ​ပုံ​ကြီး ​မ​မြင်​ရ​လျှင် ​ပုံ​ကို​နှိပ်​လိုက်​ပါ။
၅။ fonts setting ​မှာ ​ပြ​ထား​တဲ့​အ​တိုင်း Zawgyi-One font ​ကို ​ရွေး​ပေး​လိုက်​ပြီး Done ​ကို ​နှိပ်​ပေး​လိုက်​ပါ။
​ပုံ(၅) ​ပုံ​ကြီး ​မ​မြင်​ရ​လျှင် ​ပုံ​ကို​နှိပ်​လိုက်​ပါ။
Css ​မှာ Zawgyi-one font family ​အ​ဖြစ် ​ကြေ​ငြာ​ခြင်း
​ဒီ​အ​ဆင့်​မှာ​တော့ ​မိ​မိ​က ​တစ်​ခြား unicode font ​များ​ကို ​ရေး​နိုင်​ဖတ်​နိုင်​ဖို့ ​အ​တွက်​ဆို​ရင်​လည်း ​တစ်​ခြား font ​တွေ​ကို Zawgyi-One ​နေ​ရာ​ရဲ့ ​နောက်​မှာ font ​နာ​မည်​ကို (,) ​ကော်​မာ ​ခံ​ပြီး ​ထပ်​ဖြည့်​လိုက်​ယုံ​ပါ​ပဲ။
၁။ Start button ​ကို​နှိပ်​ပြီး Document ​အ​ပေါ်​က ​မိ​မိ​ကွန်​ပျူ​တာ​နာ​မည်​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ။ Dasktop ​က User ​နာ​မည်​နဲ့ folder ​ကို ​ဖွင့်​လည်း ​အ​တူ​တူ​ပါ​ပဲ။ ​တ​ချို့​ဆို desktop ​မှာ user folder ​ကို ​မ​ဖော်​ထား​ရင် ​ဖော်​နည်း​ပါ ​ပြော​ပြ​နေ​ရင် ​ရှည်​သွား​မှား​လို့ ​ခု​လို​မျိုး start icon ​က​နေ ​နှိပ်​ပြီး ​သွား​ခိုင်း​တာ​ပါ။ ​ညာ​ဖက် ​ထိပ်​ဆုံး​မှာ ​မိ​မိ ​ရဲ့ user name ​နဲ့ ​ပေါ်​နေ​တဲ့​ဖိုင်​ကို ​နှိပ်​ပေး​လိုက်​ပါ။
​ပုံ(၁) ​ပုံ​ကြီး​မ​မြင်​ရ​လျှင် ​ပုံ​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ။
၂။ Organize ​ကို ​နှိပ်​ပြီး folder and search options ​ကို ​ရွေး​ပေး​လိုက်​ပါ။
​ပုံ(၂) ​ပုံ​ကြီး​မ​မြင်​ရ​လျှင် ​ပုံ​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ။
၃။ Don't show hidden files, folders, or drives ​ဆို​တာ​ကို ​အ​မှန်​ခြစ်​ပေး​ထား​လျှင် ​သူ့​အောက်​မှာ ​ရှိ​တဲ့ Show hidden files, folders and Drives ​ဆို​တာ​ကို ​ပြောင်း​ပြီး ​အ​မှန်​ခြစ်​ပေး​လိုက်​ပါ။
​ပုံ(၃) ​ပုံ​ကြီး​မ​မြင်​ရ​လျှင် ​ပုံ​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ။
၄။ AppData ​ဆို​တဲ့ ​နာ​မည်​ဖြင့် ​ဖိုင်​တစ်​ဖိုင် ​အ​ရောင်​မှိန်​မှိန်​ဖြင့် ​ပေါ်​လာ ​တာ​ကို ​တွေ့​ရ​ပါ ​လိမ့်​မယ်။ AppData ​ဖိုင်​ကို ​နှိပ်​ပြီး​တော့ ​ဖွင့်​လိုက်​ပါ။
​ပုံ(၄) ​ပုံ​ကြီး​မ​မြင်​ရ​လျှင် ​ပုံ​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ။
၅။ Local >> Google >> Chrome ​ကို​ဖွင့်​လိုက်​ပါ။
​ပုံ(၅) ​ပုံ​ကြီး​မ​မြင်​ရ​လျှင် ​ပုံ​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ။
​ပုံ(၆) ​ပုံ​ကြီး​မ​မြင်​ရ​လျှင် ​ပုံ​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ။
​ပုံ(၇) ​ပုံ​ကြီး​မ​မြင်​ရ​လျှင် ​ပုံ​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ။
၆။ User data ​ဆို​သည့် ​ဖိုင်​ကို ​ထပ်​နှိပ်​ပြီး​ဖွင့်​ပါ။
​ပုံ(၈) ​ပုံ​ကြီး​မ​မြင်​ရ​လျှင် ​ပုံ​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ။
၇။ Default ​ကို ​ထပ်​နှိပ်​ပြီး ​ဖွင့်​ပါ။
​ပုံ(၉) ​ပုံ​ကြီး​မ​မြင်​ရ​လျှင် ​ပုံ​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ။
၈။ User Stylesheets ​ဖိုင်​ကို ​ရွေး​ပြီး ​ဖွင့်​လိုက်​ပါ။
​ပုံ(၁၀) ​ပုံ​ကြီး​မ​မြင်​ရ​လျှင် ​ပုံ​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ။
၉။ ​ကဲ ​ကျ​နော်​တို့ ​ဖြည့်​ထည့်​ပြီး family font ​အ​ဖြစ် ​ကြေ​ငြာ​ပေး​မယ့် "Custom" ​ဆို​သည့် ​အ​မည်​ဖြင့် css ​ဖိုင်​ကို ​တွေ့​ရ​ပါ​လိမ့်​မယ်။ right click ​ထောက်​ပြီး Edit ​ကို ​နှိပ်​ပြီး​တော့ ​ဖွင့်​တာ​ပဲ​ဖြစ်​ဖြစ်၊ Double click ​နှိပ်​ပြီး ​ဖွင့်​တာ​ပဲ ​ဖြစ်​ဖြစ် ​ဖွင့်​လိုက်​ပါ။ notepad ​ဖိုင်​ဖြည့် css ​ဖိုင်​လေး ​ပွင့်​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ်။ ​အဲ့​ဒါ​ဆို​ရင် ​ကျ​နော်​တို့​က ​အောက်​မှာ ​ပြ​ထား​တဲ့ code ​ကို copy ​ကူး​ပြီး ​ထည့်​လိုက်​ပါ။ ​ပြီး​လျှင် Save ​လုပ်​လိုက်​ပါ။
body, p, div, td, tr, h1, h2, h3, h4, h5, h6, para, a
​ပုံ(၁၁) ​ပုံ​ကြီး​မ​မြင်​ရ​လျှင် ​ပုံ​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ။
​ပုံ(၁၂) ​ပုံ​ကြီး​မ​မြင်​ရ​လျှင် ​ပုံ​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ။
​ကဲ​ဒါ​ဆို​ရင်​တော့ chrome ​မှာ ​မြန်​မာ​လို ​ရိုက်​လို့​ရ​ပြီး ​မြန်​မာ​စာ​လည်း ​ဖတ်​လို့ ​အ​ဆင်​ပြေ​သွား​ပါ​ပြီ။ ​အား​လုံး ​ပဲ​အ​ဆင်​ပြေ​ကြ​လိမ့်​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်။ ​တစ်​ပုံ​ချင်း ​ထည့်​လိုက်​တာ​သည် ​လုံး​ဝ ​မ​ထည့်​တတ် ​တဲ့​သူ​များ​ကို ​သိ​စေ​ရန်​အ​တွက် ​အ​ခက်​အ​ခဲ ​မ​ရှိ​စေ​ရန်​အ​တွက် ​တင်​ပေး​လိုက်​တာ ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။
​ယ​ခု ​သင်​တန်း​မှာ ​သင်​ပေး​နေ​တဲ့ ​သင်​ခန်း​စာ​မ...
PC ​မှာ viber ​ကို ​မြန်​မာ​စာ​ရိုက်​ပြီး ​အ​သုံး​...
Chrome Browser ​မှာ Zawgyi ​ဖြင့်​ရေး​ထား​သော webs...